Juju pakamba yemapurisa | Kwayedza
Juju pakamba yemapurisa
15 Oct, 2020 - 11:10	 2020-10-15T11:26:08+00:00 2020-10-15T11:26:08+00:00 0 Views
YAKAVE batai-batai pakamba yemapurisa yeMutare Central Police Station svondo rapera apo mumwe murume — uyo ane nhare yakange yatorwa nemapurisa emumugwagwa — anonzi akaudza mupurisa kuti vaite mhiko dzekuchenura foni iyi mushure mekuburitsa zviyo nebanga zvaive zvakamoneredzwa nejira dzvuku.
Murume uyu akazozvidemba sezvo akabva asungwa nekuda kwezvaaida kuti zviitwe nemupurisa izvi.
Akazomiswa mudare redzimhosva reko mazuva maviri akatevera.
Obert Muchirahondo (30) akamira pamberi pemutongi wedare reMutare Magistrates Court, Muzvare Audrey Muzhinji nemusi weChishanu achipomerwa kuita hunhu hune chekuita nenyaya dzekushandiswa kwemishonga yakaipa.
Muchirahondo anoramba mhosva ndokunzi adzoke mudare nemusi wa28 Gumiguru apo ari kutongwa achibva mutirongo.
Dare rakaziviswa kuti nemusi weChipiri svondo rapera, Muchirahondo akaenda kukamba yeMutare Central Police Station kunotora nhare yake iyo yainge yatorwa nemapurisa.
Apo mapurisa akaedza kumudzorera nhare iyi, Muchirahondo anonzi akabva ati kumupurisa aida kumutambidza atange aichenura.
Anonzi akaburitsa zviyo nebanga zvakange zvakamoneredzwa nejira dzvuku kubva muhomwe make.
Muchirahondo anonzi akaudza mupurisa uyu, Betserai Mabeza, kuti achenure nhare iyi nekubata banga iri.
“Muchirahondo anonzi akaudza mupurisa uyu kuti ainge apihwa zvinhu izvi neimwe n’anga ine mukurumbira yekuHauna.
“Anonzi akamuudza (mupurisa uyu) kuti akange aenda kunobvunzira kun’anga iyi mushure mekunge mapurisa atora nhare yake parodhibhuroko,” dare rinoziviswa.